UJulien Nonnon uguqula ubusuku baseParis bube ngumyezo wezilwanyana wasezidolophini | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Igraffiti banika umbala omninzi kunye nokuzenzekelayo kwizitrato zesixeko esikhulu, njenge-1010zz, Kwaye amagcisa ohlukeneyo adlulile apha abanobuchule obukhethekileyo ukuze basikhuphe kuloo mibala idikayo kunye nemibala yeendlela ezininzi esihlala sihamba ngazo.
UJulien Nonnon uyaqhubeka nokuhamba kwezi nooks ukusisa kwezinye amanani ezilwanyana zemiboniso eyahlukileyo kunye nokuvela okukhulu xa kuqikelelwe kwimizobo kunye nodonga lweendawo ezithile kwisixeko esihle njengeParis.
UNonnon ligcisa lemiboniso kwaye ilungu leLE3 Creative Studio oko kukhokelela ukuba umbukeli angahlali eshukunyiswa kwaye emangalisiwe ngala manani azo zonke iintlobo zezilwanyana eziphakama kubusuku baseParis.
«I-Urban Safari: Izilwanyana zasendle zaseParis» yiprojekthi yakhe entsha apho azama ukuthatha ezi zitrato, ubukhulu becala zingwevu, ziye endle, ukusibonisa ukukhanya kwezo hambo umntu anokuzithatha ebusuku ukuzola emva kosuku oluxakekileyo noxinzelelo.
UJulien Nonnon usibonisa eyakhe ubuchule obukhulu kufakelo lwekinetic kunye nendalo yedijithali ngokuguqula nayiphi na ikona okanye isikwere sibe linyathelo elimangalisayo ngaphezulu kwazo naziphi na izilwanyana ezibonakalisayo. Iitshimpanzi, iibhere okanye iikati zinxiba ngokungathi ziyinxalenye yabemi baseParis phantse ukuba zingabonwa ngazo zonke iintlobo zeempahla zasezidolophini.
Umsebenzi omkhulu ayisiyiyo kuphela ingqikelelo ngokwayo, kodwa ngokwazi indlela yokukhetha nganye yezo mpahla zinxibe loo nyani kunye nekatala okanye ela qwarhashe lihamba naye kwimagnethi duet xa ejonge kubo.
Enye indlela Ukugquma izitalato Abafazi baseParis abanalo mbono weNonnon ukuze ubusuku buguqulwe bube yinto engaphezulu kwezibane eziqhelekileyo zokukhanyisa kwaye abanye kunabanye ukuhombisa intengiso.
Unayo i-Facebook yakhe ukuqhubeka nomsebenzi wakhe omkhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Uhambo lukaJulien Nonnon lwedolophu
+ 40 Uqweqwe lweNcwadi oluBanjisiweyo
"Ukuqhubela phambili" indibaniselwano egqibeleleyo yenudes kunye nobumnyama ngu-Olivier Valsecchi